Umaki: ikheli le-ip lesiphequluli | Martech Zone
Maka: ikheli le-ip lesiphequluli
Lithini ikheli lami le-IP? Futhi Ungayikhipha Kanjani ku-Google Analytics
ULwesine, April 1, 2021 ULwesine, April 1, 2021 Douglas Karr
Kwesinye isikhathi lapho udinga ikheli lakho le-IP. Izibonelo ezimbalwa zenza uhlu lwezilungiselelo zokuphepha zibe mhlophe noma zihlunge ithrafikhi ku-Google Analytics. Khumbula ukuthi ikheli le-IP elibonwa iseva yewebhu akuyona ikheli lakho le-IP yangaphakathi, ikheli le-IP lenethiwekhi okuyo. Ngenxa yalokho, ukushintsha amanethiwekhi angenazintambo kuzokhiqiza ikheli elisha le-IP. Abahlinzeki abaningi be-Intanethi ababeki amabhizinisi noma amakhaya i-static